Indlela yokufaka umoya kwiminatha ye-aquaculture
ngu admin on 21-05-19
Ishishini lokuzala lishishini elikhulu kwaye uphuhliso lweshishini lokuzala luhle kakhulu. Sikholelwa ukuba ukufuya iinkukhu kulula kwaye akubizi kakhulu, ngoko ke zininzi iindawo zokukhetha ukukhulisa iinkukhu. Ukuya ekuzaleni, bakholisa ukukhetha ukusebenzisa umoya...
Indlela yokufaka ngokufanelekileyo umnatha wokuzalisa iintaka
Namhlanje, i-anti-birdnet yimveliso esetyenziswa rhoqo, kwaye ukusebenza kwayo kuhle kakhulu kwiinkalo ezahlukeneyo. Umzekelo, ichasene nokuguga kwaye inamandla aphezulu, ukumelana nobushushu kunye nokuxhathisa kwamanzi. Kuba ezi mveliso zisetyenziswa kwiindawo ezahlukeneyo, ze...
Ukugubungela umnatha womthunzi
Ngoku lixesha letekhnoloji ephezulu. Iimveliso ezininzi zisetyenziswa kwezolimo, kwaye iminatha ye-sunshade yenye yazo. Ukusetyenziswa kweinetha ze-sunshade kunika izibonelelo ezininzi kubasebenzisi, kwaye iingenelo ze-sunshade net zibandakanya ukuxhathisa ukubola. Ukumelana nemitha kunye nokukhaphukhaphu. Kwaye nam...
Iimpawu zeRice Bird Net
Okwangoku, iintaka ezininzi zisela ukutya, kodwa ukuba iziphumo zobusela obukhulu zisabalulekile, abachaphazelekayo baphuhlisa iminatha yeentaka ukulungisa iimeko ezinjalo. Ngenxa yeemeko ezahlukeneyo zokusetyenziswa, iintlobo zeminatha yeentaka...